नयाँ मोर्चा जन्मियो – Sourya Online
नयाँ मोर्चा जन्मियो
सौर्य अनलाइन २०६८ चैत १० गते २:२९ मा प्रकाशित
काठमाडौ, ९ चैत । एकीकृत नेकपा (माओवादी)को संस्थापन पक्षसग रुष्ट वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य समूहले साना १२ सङगठनसग मिलेर मोर्चा गठन गरेको छ । जनसंविधान र सङ्घीयताका पक्षमा भन्दै गठित मोर्चाको अहिलेसम्म नाम जुर्न सकेको छैन ।
मोर्चाको न्वारन गर्न वैद्य समूह र साना दलका नेताबीच बिहीबार बसेको बैठक नेताहरूको आ–आºनै अडानमा कारण अनिर्णीत रह्यो । वैद्य समूहले ‘राष्ट्रिय संयुक्त जनसङ्घर्ष समिति नेपाल’ नाम राख्न गरेको प्रस्ताव साना दलले अस्वीकार
गरेका छन् । उनीहरूले ‘संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन समिति’ नाम राख्न प्रस्ताव गरेपछि विवाद भएको स्रोतको भनाइ छ ।
वैद्य समूहको पहलमा गठित मोर्चामा एमाओवादी सचिव सिपी गजुरेललाई संयोजक बनाइएको छ । मोर्चामा संयुक्त राष्ट्रिय जनसङ्घर्ष समिति, मणि थापा अध्यक्ष रहेको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, मातृका यादव नेतृत्वको नेकपा (माओवादी), श्रीष मगरको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, डा. केशवमान शाक्यको नेपाः राष्ट्रिय पार्टी, खगेन्द्र माखिमको सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, परशुराम तामाङको ताम्सालिङ नेपाल राष्ट्रिय दल नेपाल, अटलमान राईको जनमुक्ति पार्टी नेपाल, राजकुमार लेखीको नेपाल नागरिक पार्टी, रामसिंह लामाको आदिवासी जनजाति महासङ्घ
(समाजवादी), सुरेश आले मगरको आदिवासी जनजाति क्षेत्रीय महासङ्घ नेपाल र उपेन्द्र यादवको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल छन् ।
मोर्चामा आबद्धमध्ये थापाको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी यादव नेतृत्वको माओवादी हालको एमाओवादीबाटै चोइटिएका दल हुन् । उपेन्द्र यादवको फोरम नेपालबाहेक अन्य साना दलको खासै जनाधार छैन ।
शुक्रबारसम्म पत्रकार सम्मेलन गरेर नाम र सङ्घर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए । ‘मोर्चाको नाम र सङ्घर्षका कार्यक्रममाथि छलफल भइरहेको छ,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘शुक्रबार बिहानसम्म टुङ्गो लगाउछौ ।’
एमाओवादीको वैद्य समूह र साना १२ दलको बिहीबार ललितपुरको कोपुन्डोलस्थित माओवादी जनवर्गीय सङ्गठनहरूको कार्यालयमा बसेको बैठकले यही १८ चैतदेखि १० जेठसम्मका लागि सम्भावित सङ्घर्षका कार्यक्रम भने तय गरिसकेको छ । कार्यक्रमअनुसार १८ चैतदेखि १० जेठसम्म सङ्घीयता, जनसंविधान, राष्ट्रियताका पक्षमा र भ्रष्टाचारविरुद्ध सबै निर्वाचन क्षेत्रमा हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरिनेछ । सङ्कलित हुने हस्ताक्षर सभामुखमार्फत सबै सभासद्लाई बुझाइने अध्यक्ष
आन्दोलनका प्रारम्भिक कार्यक्रमअन्तर्गत २६ चैतमा ‘राष्ट्रियताका पक्षमा प्रतिरोध दिवस’ मनाइनेछ । यस्तै, ३० चैतमा महगी र राजनीतिक भ्रष्टाचारविरुद्ध मुलुकभर भण्डाफोर गर्ने कार्यक्रम छ ।
भण्डाफोर कार्यक्रममा एमाओवादी, कांग्रेस र एमालेका सङ्घीयता र जनसंविधानविरोधी नेताहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने नेपाल नागरिक पार्टीका अध्यक्ष लेखीले बताए । जनसंविधान र जातीय सङ्घीयताका पक्षमा रहेका यी दलले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको राजीनामा नमाग्ने निर्णय गरेका छन् । साना दलहरूको असहमतिका कारण प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई एजेन्डा नबनाउने निर्णय भएको हो ।
संयोजकको जिम्मेवारी माओवादी सचिव गजुरेललाई दीर्घकालीन रूपमै दिएको नेपाल नागरिक पार्टीका अध्यक्ष लेखीले बताए ।
‘लक्ष्य प्राप्त नहुदासम्म मोर्चाको संयोजक गजुरेललाई बनाएका छौ,’ उनले भने, ‘मोर्चाको कार्यविधि र क्षेत्राधिकारबारे अझै टुङ्गो लागिसकेको छैन । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष थापा पनि संयोजकबारे खासै मतभेद नरहेको बताउ“छन् ।